Tsvaga Intoxication editorials
Vol. 16 No. 4 Intoxication
Vol. 16 No. 5 Psychic inxication
Vol. 16 No. 6 Kuora mwoyo mupfungwa
Vol. 17 No. 1 Mafungiro epfungwa uye zvekunamata
Vol. 16 JANUARY, 1913. Nha. 4
Copyright, 1913, neHW PERCIVAL.
SHOKO kudhakwa riri mu "Standard Dictionary" raireva kuti, "Chiito chokudhakwa, kana kuti kudhakwa; kudhakwa. Mamiriro ekufara kukuru kwepfungwa; kusununguka, kunotswa, kunotsanangurwa se "Pasi pemubatanidzwa wezvinodhaka zvinodhaka kusvika pakurasikirwa nekugadzikana kwechimiro chemuviri nemafungiro epfungwa, ... kusvitsa chido chokurwisana, kukakavara uye kurara nemhuka. "
Kunwa doro ndiro shoko rakagadzirwa neshoko kana muviri, chepfu, kubva muchiLatin, muchetura, kana chiGiriki, Toxikon, zvinoreva chepfu; the prefix in zvinoreva kutora kana kubudisa; uye, chinokwana, , zvinoreva chiito, hurumende, kana mutambi. Kuita doro kunonzi "chiito chekuisa chepfu kana kuti chekuve muchetura." The prefix in rinoreva kupindira mukati kana kubudisa "nyika yekuve nechepfu."
Uturu hunonzi "chinhu chipi nechipi chinotorwa muhurongwa chinotyisa nenzira isingaiti magetsi, achida kuita kuti rufu kana kuipa kwakanyanya kuhutano." Saka kudhakwa ndiko kutora muhupfu, kana kubudisa chiitiko chekuva chepfu; iyo inogona "kukonzera rufu kana kukanganisa zvakanyanya kuhutano." Nguva yakafanirwa nokuda kweizvi, zvichienderana nehuwandu uye hutano hwezvinodhaka zvinotorwa kana kubudiswa uye pakukwanisa kana kusakwanisa kwebumbiro rekuita kuti riite kana kuti rirwise.
Izwi rokuti kudhakwa hakushandiswi nemazwi emanyoro emazuva ano mupfungwa chete yekudhakwa kana kushandisa zvinodhaka, asi nenzira yakazara, sekushandiswa kwepfungwa uye tsika. Mhedziso yeshoko ndeyechokwadi mumashandisirwo ayo kune pfungwa nemafambiro sezvazvakashandiswa pakushandiswa kune doro. Pano, shoko rinodhakwa richashandiswa mumutauro mana.
Kune marudzi mana ekudhakwa kune munhu anozviisa pasi, maererano nemasikirwo ake mana: Kudhakwa kwehuviri hwake, hwepfungwa dzake dzepfungwa, hwemafungiro ake, uye zvekunamata kwake. Kunwa kwechimwe chezvisikwa zvake zvinogona kuita pane imwechete kana pane imwe neimwe yezvimwe zvitatu. Mhando yekudhakwa inobatwa ichava kudhakwa kwepanyama, kudhakwa kwepfungwa, kudhakwa kwepfungwa, uye kudhakwa kwemweya.
Rinoshandiswa pakurondedzera kune aya mana emishonga yekunyadzisa zvinorehwa neshoko kudhakwa ndezvekuti: Mamiriro ehupfu hunokonzerwa nekunyanyisa kunokonzera kana kudzivisa kushandiswa neanoziva nezvemabasa ayo emumuviri, maitiro ayo, masimba ayo epfungwa kana masimba ayo.
Kune imwe neimwe yezvinodhaka zvina kune zvinokonzera, zvinodhaka, nzira dzayo dzokugadzirisa, zvikonzero zvekudhakwa, zvinokonzera kudhakwa, nguva yaro uye kupera, uye kurapa kwayo.
Doro uye zvinodhaka zvinokonzera kudhakwa. Zvinwiwa zvakadai sewaini, zvidimbu, mawaini, magini, rums, brandies, whiskeys, liqueurs, zvinwiwa umo mweya wewaini ndiyo doro rinodhaka. Nzira yekudhakwa ndeyokunwa kweizvi kana zvimwe zvinodhaka, kana kuitora sezvivako zvekudya. Pane zvikonzero zvakapiwa zvekutora doro zvinodhakwa, zvakadai sekuti inzira yekugutsikana, inobatanidza hukama hwakanaka, inobvumira kushamwaridzana kwakanaka, inokonzera hukama, kuti iyo inofadza, inozorodza, iyo inodzivirira blues, iyo inoderedza dambudziko, rinodzinga kurema kwekunetseka, kunoderedza kusuruvara, kunokonzera kukanganwa kwekutambudzika, uye kunokunda kuora mwoyo, kuti kunomuka ushingi, kuti inokurudzira kufunga. Vamwe zvakare, vatorei nokuda kwerudo rwekunzwa kwarunobereka, uye vamwe nekuda kwemishonga inorayirwa nechiremba.
Migumisiro yekudhakwa kunoratidzwa nezviito zvemuviri, mamiriro emumuviri, mazwi, unhu, uye nemafungiro evanhu; izvo zvakagadzirirwa nehuwandu uye huwandu hwezvinodhaka zvinotorwa, mamiriro emuviri anoipedza, uye kukwanisa kwepfungwa kubata nemidhakwa nemuviri. Maererano nehupenyu hwemunhu uye zviyero zvakasiyana zvekudhakwa, pane kuratidzirwa kushamwaridzana, kushamwaridzana, kushamisika nenzira yakaperekedzeka nekuzvipira, kukwikwidzana, kukwikwidzana, kukakavara, kukakavara kwekutaura; uye izvi zvinoteverwa nokuora mwoyo, kuzvidzora, kupera, kusvibiswa, kusagadzikana kwemaitiro, kuoma uye kusava nechokwadi mumatauriro, kuoma, kutadza, kusava nekuziva. Ikunzwa kunokonzerwa nekugadzikana kwezvinyoro kunotyisidzirwa zvechisimba, kubva pakufara kukuru kune kutambura nekufa.
Iro doro mune zvose zvinodhakwa zvinodhaka zvinotanga kubudisa migumisiro yaro pamutemo wose wemuviri pakarepo kana ichiendeswa mudumbu. Pasinei nokuti kuipa kwayo kuchakurumidza kubudiswa kana kuti nguva yakareba inoderedzwa inobva pane kuwirirana kwezvinwiwa uye chikamu uye simba remweya wewaini munharaunda. Zvichienderana nechikamu, doro rinotanga kukanganisa muviri kana uropi. Muzviitiko zvose, zvisinei, zvinoshanda zvakananga pane zvirongwa zvemagandanga, ipapo pamvura inobuda mumuviri, mishonga, uye inosiya kwete chikamu chemuviri usina kubatwa. Kana inotorwa zvishoma nezvishoma nevanhu vane muviri wakasimba, avo vane hutano nekudya zvakanaka, zvinogona kunge zvingave zvinobatsira; kunyanya, hapana kushungurudzika kunotambura. Nenguva yakareba uye inoshandiswa kushandiswa, kunyange mune zviduku zvishoma, uye kunyanya nevaya vane pfungwa dzisina simba, tsika dzisina simba uye miviri isina simba, migumisiro yakaipa. Pakutanga kutorwa, doro rinoshanda seinosimudzira mudiki mudiki. Mukudhura kukuru kunobereka kudhakwa; ndiko kuti, nheyo huru uye inonzwira tsitsi inoshandiswa pairi, iyo lobes yecherebrum inowedzerwa. Izvi zvinodaro uye zvisati zvichinyatsogadziriswa-maginal system, chirwere chepfungwa chepakati remagetsi zvinokonzera, mishonga yokuzvidira inoshandiswa kusagadzikana, dumbu rinotambudza uye mabasa aro anorambidzwa. Zvikamu zvomuviri chete zvisingabatwi nechisimba uye kuora mitezo ndiyo inowanzochengetedza mu medulla oblongata, iyo inoenderera mberi uye inodzora kupararira uye kupemha. Kana imwe doro isati yatorwa, nguva yekudhakwa inoguma, muviri unotangazve mabasa ayo, kodzero pachayo uye zvinokonzerwa nedoro rinogona kupera. Nenguva dzakawanda dzekudhakwa, kana nekunwa kwekudhakwa mune chero ipi zvayo, hurongwa hwehutano hunowanzosvibiswa, nhengo dzisina simba kana kuti dzinorwara uye haigoni kuita mabasa avo anogara achiita. Iyo doro inokonzera kupera kwezvinyorwa zvepachivande zvemuviri uye kuongorora mabasa ayo uye kunokanganisa kudya. Inomesa chiropa, inowedzera mwoyo netsvo, inokonzera kuora kweuropi. Muchidimbu, zvinoderedza hurumende kuburikidza nekukonzera kudarika kwezvibatanidza zvinoshandiswa mune zvese nhengo nenyama dzomuviri. Mushure mekufa kuvapo kwedoro kunogona kuwanika mumvura yose yemvura. Inowanikwa nyore nyore mu-cerebro-spinal fluid kana zvose zvayo zvichinyangarika kune imwe nzvimbo mumuviri; iyo inoratidza hukama hwayo hwemamiriro emagetsi.
Zvichida kusinganzwisisiki kwezviitiko zvinotevera, uye nekuvimba kwezvakanaka izvo zvingaita varwere vavo, vanachiremba vave izvo zvinokonzera doro rakawandisa doro. Vanachiremba vakawanda vanopa doro mune chero ipi zvayo maitiro akaita seinosimudzira kana kuti ane simba, uye dzimwe nguva inonzi ichave mune dzimwe nzira inoita ropa, kupa simba, kuvaka muviri. Pasinei nokuti izvi zviri kana kuti hazvisizvo, ndeyechokwadi kuti doro rinotorwa sechiremba rakanyengera kugadzira chido uye chido chezvinwiwa zvinodhaka mumuviri, uye murwere anowanzotanga kuva chidhakwa.
Imwe nzira yekukudhakwa kudhakwa ndeyokugadzirwa kukuru uye kutengeswa kwezvinodhakwa zvinodhakwa pasi pechifukidzo chezvinonzi "mishonga yepamutemo." Izvi zvinoparidzirwa zvikuru kuti zvirape maitiro ose anozivikanwa kana kuti anofungidzirwa uye anorwara. Avo vanotenga chirwere chechokwadi chemishonga chechipatent inotyisa vanofunga kuti vakabatsirwa nemushumo unokurudzira unobereka, uye vanotenga zvakawanda. Zvimwe zvinoshandiswa zvechirapa-zvose zvinowanzokuvadza. Asi doro iri mune mishonga yepamutemo inowanzoita kuti avo vanoishandisa vashandise, izvo avo vanozvigadzira vanofunga kuti zvinofanira. Iko ndiko, kunokonzera kudya uye chido chodhakwa mune izvozvi.
Izvozvo zvinokonzera kudhakwa kudhakwa kwemazwi zvakasiyana-siyana kubva kunzwiro rweunyoro kune chimiro uye simba guru, uye zvishoma nezvishoma kupedzisa kusazvidzivirira. Iko kuchinja kunogona kuteverana zvishoma nezvishoma kana kukurumidza. Kune chiedza chinotenderera chinopinda mumuviri uye chinoita manzwiro anofadza. Ziso nenzeve zvinowedzera kuchenjera. Iyo tambo ndiyo keener. Kune manzwiro ekugadzirisa uye kushamwaridzana kunokonzera kutsvaka kushamwaridzana nevamwe, kana zvisinei kuve nehanya, kufara, hutsvene uye kusagadzikana nechishuwo chekutiza kubva kune vamwe uye kuva voga, kana neine tsika yekupikisa uye kurwara. Kune manzwiro ekupisa, kugadzirira kugumburwa, kupopotedzana kana kurwisana pamusoro pezvinoitwa kana zvataurwa. Manzwiro ekurwara kana okushaya simba anonzwa. Zvinhu zvakapoteredza zvinoratidzika sekutama uye kufanana. Nyika inofamba mumafungu anononoka, kana segungwa rinotambudzika. Hapana kana chokwadi chemafaro. Tsoka nemakumbo zvikava masero makuru. Maziso anotakura uye anoshambira, nzeve dzinopera. Rurimi rwakanyanya kwazvo, uye rinoramba kurondedzera. Miromo inorasikirwa nekushanduka kwayo; ivo vari matanda uye havazobatsiri mukuumba inzwi mumashoko. Kugona kunouya. Muviri unonzwa sekutungamira. Izwi rekuziva rinodonhedzwa kubva munharaunda yaro ine nharo muuropi, uye kune kuwa kwekusaziva nekufa. Izvo zvinotevera migumisiro yekudhakwa ndeyeimba yepamusoro, misoro, nyota, kupisa, kudedera, kutya, kuseka kunoseka pakufunga kwezvinodhaka, chido chinokuvadza kana kushaya nzara kune zvimwe zvinwiwa, chigadziro, upenzi kana kuti kunyengedza, mamiriro ezvinhu anonzi delirium tremens, umo maanoziva anoomanikidzwa pasi pehuviri hwenyama, paanoona zvisingakuvadzi kana zvisikwa zvisingaoneki, nhunzi, zvipembenene, hurumende, nyoka, missapen mhuka, izvo zvakakanganiswa kuedza kudzinga kana kubva kwaanoedza kupukunyuka nezvishoma kana kuti kwete kutarisira mamiriro ezvinhu epanyama kana avo avo vakamupoteredza. Mune hurumende iyi kutambura kumwe kunogona kungofungidzira uye kutora nhunzi dziri kubva pamadziro, kana kudzingira zvinhu kuburikidza nemhepo izvo hakuna munhu kunze kwekuti anogona kuona, nemaziso achikurira nekutyisa, achifembera nemufaro, kana kuti angave, anotonhora uye akajeka nekutya , edza kuderedza zvinhu zvinomutsvaka, kana kutiza kubva pane zvaanoona, kusvikira apinda mukudengenyeka, kana kubva pakupera simba kunowira.
Migumisiro yedoro pamusangariro, unhu, pfungwa yeumwe munhu, inobva pane zvakakosha pamagariro ekudzora kushandiswa kwayo; asi, pasinei nokuti yakasimba pfungwa, kupfuurira kushandiswa kwezvinodhakwa zvinodhaka zvakakura zvichange zvisingabvumirwi kubudisa zvakafanana. Inofanirwa kuchinja pfungwa nemunhu; uye, kunze kwekukundikana, ichaputsa uye kuisa pfungwa mupfungwa.
Pasi pesimba rezvinodhaka zvisingazivikanwi kushandurwa kunoita sezviri kuitwa mumunhu. Munhu akanyarara uye akanaka-munhu anozoshandurwa kuva mutsara kana dhiyabhorosi, uye uyo anowanzopiwa hurukuro yakawanda uye utsinye angave ane unyoro uye asina njere. Pasi pekudhakwa nedoro vamwe vanozopengesa sevana kana kubheta sevasina kunaka. Vamwe vachaomerera pakuudza nyaya yehupenyu hwavo. Varume vakaderera vanogona kuva nemanzwiro uye vhiki pamusoro pezvimwe zviitiko. Vaya vanoseka chitendero nemararamiro ayo, vanogona kudzokorora mavara marefu kubva mumagwaro, kupa zvinyorwa pamusoro pezvidzidzo zvechitendero, kunamatira imwe nzira yechitendero kana mhemberero dzechitendero uye vanopikisa chikonzero nekudikanwa kweutsvene, pamwe pamwe nezvakaipa zvekudhakwa. Pasi pekudhakwa nedoro vamwe varume vanozadza zviremera zvekutenda uye kukudzwa zvinoshandurwa kuva mhuka dzinopa rusununguko rwekutonga uye dzinoita zvido zvayo zvekunyanya nekuchiva, vanoita muhupenzi hwakashata, pfungwa yeiyo inogona kuvhiringidza shamwari dzavo sezvazvingazviita pachavo . Pasi pesimba rekuuraya doro nedzimwe mhosva dzakapiwa izvo vanhu vasingakwanisi kuita kuti vaite, uye zvinounza kushungurudzika uye kuparadzwa ivo pachavo nevamwe.
Doro rinoderedza pfungwa dzevamwe uye inokurudzira kufunga kune vamwe. Vamwe vanyori uye vanyori vanoti vanoita basa ravo rakanakisisa kana vari pasi pesimba rayo; asi izvi ndezviitiko zvenguva pfupi, pasi pekusimudzira doro. Kunwa kudhakwa kunopesera tsika, kunongedza pfungwa, uye kuputsa pfungwa. Mamwe maitiro ekudhakwa kwepanyama anogona kukonzera kushushikana, kubvisa matambudziko emhuri, kuparadza utano uye kukonzera rufu; asi kunwa doro bedzi kunogona kuparadza zvachose kutendeseka uye kuongorora, kubvisa matanho ose ekuremekedzwa nekuzviremekedza, kuchinja vanhu kuvimbika uye mutsa mumapenzi asina njere uye mbavha uye zvinorevekesa, zvisingabviri kukuvadza kune vamwe, uye kubereka kusanyadziswa kukuru uye kusvibisa. Doro chete yakakwanisa kuita kuti varume vepfuma netsika vagomhanyira mumvura, uye kubva ikoko, kuderedzwa, kusimudza maziso avo eropa uye kusvibisa maoko avo asina kusimba kuti vakumbire mupfuuri kuti vakwanise kutenga kunwa.
Zvimwe zvinokonzera kudhakwa kwepanyama nemisungo zvinoshandiswa kwewapium, ganjah (kubva cannabis indicaBhangcannabis sativa), zvakasiyana-siyana izvi mumakemikari avo akasiyana uye nezvimwe zvinhu.
Zvikonzero zvakapiwa zvekutora nharo, ndezvokuti vanonyaradza marwadzo, vanobvisa marwadzo, vanoita kuti varare, uye vanoita kuti vatengi vabve pane dambudziko, ona zviratidzo uye vanzwe manzwi asina kujairika, uye kuti vanofanira kutorwa- haigoni kubatsirwa. Nzira dzinoshandiswa nenyaya dzekushungurudza idzi dzinoshandiswa nenzira yepiritsi, yakanyorwa, nejojo, nekusvuta kana kuidya. Vanachiremba ndivo vanowanzotaurira vanorcotics kune avo vanozopedzisira vava kunetseka kunwa doroki. Kuziva chido chomurwere kuti ave nemigumisiro inokurumidza uye kuti awane ruzivo kubva mukurwadziwa, kana kugutsa chido chavo chechirwere, chiremba anonyora kana kupa mhirizhonga asingatauri zvakakodzera nemigumisiro inogona kutevera. Nokushandiswa kwemajinga avo, mapeti avo uye maitiro avo, vamwe vanachiremba vanodurura kubva kuvarwere vavo mutsara we morphine inowedzera gore negore. Kunzwa mararamiro akanaka anokonzerwa nekusvuta kweapium, kuva ne "shamwari," anodhakwa netsika iyo inoratidzira kuedza, kuenderera mberi, vachiona vanhu vanoputa nemapapi avo nemapapipe, kunze kwechido chisingadi, kana kuti kubva kuchido chisingadi, mumwe anoedza pombi, "chete." Izvo hazvisi nguva yakakwana. Chimwe chinhu chakakosha "kubudisa chiitiko." Izvozvo hazvisi izvo zvaanotarisira. Anofanirwa kuwana chinotarisirwa. Anozviita zvakare. Saka anova "mishonga yemishonga." Nenzira imwecheteyo imwe inogona kupinda mutsika ye ganjah, iyo inowanzosvuta. Bhang akadhakwa, kana kudyiwa sekuvhara, kana kutorwa sewaini mukunaya kwayo isina simba, inonzi siddhi. Bhang haisi hehish kana indian hemp. Migumisiro yaro yakasiyana. Hashishi ndiyo mashizha mashizha kubva cannabis sativa, isati yasvika, mapeji acho akaomeswa uye anoputa. Bhang ndiwo mashizha anotorwa mushure memaruva, ashambwa, akaputika uye akadhakwa. Bhang haisiwanzi kuzivikanwa kumavirira, asi kunonzi inowanzoshandiswa muIndia. Ikoko kunonzi kunotorwa nemunhu oga, kana pakusarudzwa kusarudza, kana pamutambo mukuru wegore negore-Durja Pujah.
Izvozvo zvinokonzerwa nemarcotics pamuviri ndeyekuti zvinopesana nekudya, kuwedzera kana kuderedza kufema uye kupararira uye kuparadza mitsipa kana kuita kuti zvive nyore. Opium inoita kuti muviri usashanda. Ganjah inogona kuita sechinhu chinonakidza. Bhang inounza kugadzikana. Migumisiro yezvinonyadzisira zvinokonzerwa nemisungo ndeye, kunyarara kwepanyama uye kuvhura kweimwe pfungwa kune zvinhu zvisiri zvemuviri, zvisingaitiki. Iko kune manzwiro ane simba, anorota, sekupfuura mumumoto unomuka. Nzvimbo dzepanyama dzinogona kuwedzerwa, kuwirirana kana kuwira kubva pane zvitsva zvinoonekwa. Vakadzi vekunakisa, varume vakanaka, vanoita kana kutaura nekutaura. Mu enchanted minda iyo inofadza ziso, mimhanzi inokwidziridzwa inonzwika uye zvinonhuwira zvinonaka zvinowedzera kune chitubu. Izvo zvinonyanya kufarira kumanzwiro ake, zvinoita kuti tinyatsoongorora nyaya yacho. Relaxation, chiremera uye kusununguka zvinonyanya kutaurwa kubva pamigumisiro yeopium pane kubva ku ganjah. Ganjah kazhinji inokonzera kuti nyama dzemuviri dzive dzakashanda kupfuura dzakabva pamigumisiro yeopium. Ikunzwa kunokonzerwa neBhang kunotungamirirwa nevaya vanowedzera panguva yekutora kwayo, asi avo vanobva opium uye ganjah kazhinji vanosiyana zvakasiyana. Mu ganjah uye opium kunzwa kunowedzera. Mu opium izwi rinowedzera kusvikira nyaya yacho isingazivi. Kubva pahupenyu husingazivi iye anobuda zvishoma nezvishoma kana nekutya. Chinhu chakanaka, kubvutwa, kufara kunowanzopindurwa. Panzvimbo pezvisikwa zvekudanana zvinomunyengedza kana kumutsamwisa, iye anotarisana nemafaro, zvinokanganisa, mhuka, nezvimwe zvinhu zvinosemesa uye zvinotyisa, kubva pane zvaanogona kutiza chete nokutora nhoroondo zvakare. Zvichida anongobatwa nemoto wakaoma kana kuparadzaniswa misoro uye zvimwe zvinetso zvemuviri zvaanogona kubvisa nokutora imwe muzinga. Izvo zvinotevera zvinokonzerwa neBhang hazvisi izvo zvakataurwa, kunyange zvinogona kubvisa chido; zvirokwazvo, ichadzivirira nzara; uye iyo, zvakare, inogona kubudisa manzwiro okusakosha, kusava nekushaya maturo. Kana mukana wakawandisa zvikuru wakatorwa, mutengi haazopizve.
Kunwa doro kunokonzerwa nekudhakwa kwakagadziriswa pamagariro uye unhu hweiye anozviisa pasi pake. Anowana humwe rusununguko uye kukurudzira kwepfungwa uye kutamba kwemafungiro, ayo asina munhuwo zvake anogona kuva nawo mumamiriro ake ezvinhu. Iyi pfungwa inotora mapapiro uye inofamba nenzira dzinenge dzisingaratidzi dzisingabviri, mune imwe nzvimbo iyo uye maererano nechishuvo chekufungidzira, inovaka zvivako, inogadzirira hondo, inogadza hurumende. Anotombosika nyika uye vanhu; mune zvose zvaanoshandisa simba remasimba kuita uye kufara. Pasi penyaya yekudhakwa munyori anozvininipisa anogona kuva mambo wemari, uye kutarisira misika yenyika; musikana muchitoro anova mambokadzi, anopinda nevatengesi uye anonamatwa kana ane godo nevasikana vake; mushanyi asina pokugara angangova ishe wezvinhu zvakawanda. Chinhu chero chipi zvacho icho pfungwa uye mafungiro angaita kuti zviitike ndezvechokwadi chaiyo mukunyadzisira kunodhaka.
Ichi chiito chemafungiro chinounza kugadzirisa pane unhu hunohuisa pamabasa ayo nemabasa munyika. Pane kusabatanidzwa kwezvinhu zvezvinhu. Kucherechedza kunoparadzaniswa pakati penguva yekudhakwa nezvisungo munyika. Nzira dzetsika dzinoderedzwa, kana tsika dzinogona kukandwa kumhepo. Kunyange zvakadaro, munhu akagara akapindwa muropa nedoroki akaedza kuvanza tsika yake, ichazivikanwa kune avo vanonzwisisa maitiro ayo. Pane chimwe chinhu chisina maturo, chisina maturo, chisina kuchena, pamusoro pemunhu, sekunge kuti pfungwa dzake dzakanga dzichiita kune imwe nzvimbo. Anoratidzirwa nehumwe kusasipo kwekumuka, uye akakomberedzwa nemamiriro ezvinhu chaiwo kana kunhuhwirira kunobatanidzwa nehutano hwemhirizhonga kwaanenge akadhakwa, uye izvo zvaanoita sokuti hazvisi izvo.
Migumisiro yeBhang yakasiyana neye opium uye hashish mukuti mushandisi weBhang angasarudza nyaya yepfungwa yake asati atora. Pasi pesimba reBhang, mumwe anogona kuramba achikurukurirana kana kutungamira nzira yekufunga. Asi eveything iye anofunga kana kuita ichawedzerwa, kuwedzerwa kana kuwedzerwa kusvika pachiyero chinoshamisa. Nyaya ipi zvayo yepfungwa inogona kuongororwa mupfungwa sezvinongoita sechidimbu chemuviri pasi pesimba guru remasvoscope. Zvinhu zvakakomberedza zvinhu kana mazwi emifananidzo zvichawedzerwa uye zvinyorwa kuti zvienderane nemafungiro akadaro. Kushandura kwose kunoonekwa kunokosha zvikuru. Chikamu chechipiri chinofukidza nguva refu. Nhanho yakaita seyadhi yemadhora; kweminiti semwedzi, awa nezera; uye izvi zvose zvinogona kuitika kunze kwekudziviswa kubva mumuviri.
Migumisiro yepfungwa yekunyadziswa kunonyadzisa ndeyekuti, pfungwa dzinorasikirwa nemafungiro ehutano uye pfungwa yekuenzanisa; inopera simba, uye inova isina kukwana, isingakwanisi kurwisana nezvinetso zvehupenyu, yekuenderera mberi nekugadzirisa kwayo, yekuzadzikisa mabasa ayo kana kuita chikamu chayo mubasa renyika.
Nguva yekudhakwa kana kunwa doro kunogona kugara kana kwenguva pfupi. Kune vamwe avo, mushure mokunge vaine matambudziko kwenguva pfupi vakaramba kuvatsvaga. Asi kazhinji kana munhu akava muropa kune imwe tsika, anoramba ari muranda wake kuburikidza nehupenyu.
Kune humwe hurapa hwekudhakwa, pasi pemazita evanotanga, izvo zvinoderedza chishuvo chekudhakwa chero kupi zvako. Kurapa kwechirwere chekunyadzisa kunodhaka hakuwanzo kubudirira. Kana uyo "achirapa" asingatorizve kunwa iye acharamba achirapa. Asi kana iye asina kutanga kuporesa mupfungwa yake uye kana akabvumira kufunga kwake kufungisisa pane nyaya yekunwa kwake uye kufunga nezvechiito chekunwa kwake, pfungwa yekunwa ichaunza mamiriro ezvinhu akaoma, iyo inokurudzirwa nayo mumwe kana kuti nemafungiro ake, "kutora imwe chete zvakare." Ipapo nzara yekare inomutswa, uye inodzokera kune yaimbova.
Kuporesa kunwa doro kana kunwa doro kunogona kupa ruregerero uye kubatsira pakuita mushonga, asi mushonga chete wekudhakwa kwepanyama kunofanira kutanga uye kugadziriswa nepfungwa. Iko kurwisana kwekudzivirira uye kudzivirira kunofanira kurwirwa kusvikira pakupedzisa uye kupona, kusati kwave nekugona kurapwa zvachose muchokwadi.
Mweya unoshanda kuburikidza nezvinodhaka unogara pachikumbaridzo chemazwi. Izvo hazvizobvumiri pfungwa yekuziva mumunhu kuti apfuure mberi kwaro nyika, kana kuti kuziva zvakavanzika zvayo uye chakavanzika, kusvikira azviratidza kuti anozvidzivirira kune zvinyengeri zvemazwi uye akadzidzira kuzvidzora.
Mweya wewaini ndeye mukuru mukuru wemutemo. Rinomira pamiganhu yemiganhu yenyika. Icho mushumiri weavo vanoteerera uye vari vatenzi vemutemo, uye vanovabvumira kuti vapfuure uye kunyange kutakura ivo pavanoziva uye vanogona kuzvidzora. Asi iyo inotyisa, isina tsitsi uye ine utsinye, kune avo vanoshungurudza uye vasingateereri mutemo inofanira kushanda.
Mune nhamba yaFebruary ichabatwa mamwe maitiro eInidenti.